अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमित, कुन देशमा कतिको मृत्यु ? - समय-समाचार
अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमित, कुन देशमा कतिको मृत्यु ?
समय-समाचार बिहीबार, २०७७ जेठ १५ गते, २२:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा संक्रमित हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
बिहीबार एकै दिनमा १ लाख १६ हजार ३ सय ४ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । बुधबार थपिएका संक्रमितको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ७५ थियो । मंगलबार ९१ हजार ८ सय ८२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसअघि मे २२ अर्थात जेठ ९ गते सबैभन्दा बढि व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए । उक्त दिन १ लाख ७ हजार ५ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उक्त रेकर्डलाई तोड्दै बिहीबार एकै दिनमा १ लाख १६ हजार ३ सय ४ जना संक्रमित थपिएका हुन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा भने ५ हजार ८६ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार ४ हजार ६ सय १२, मंगलबार ५ हजार २ सय ८३, सोमबार ४ हजार ४८ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोनाबाट अहिलेसम्म ५८ लाख ३ हजार ४ सय १६ व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने ३ लाख ५९ हजार ७ सय ९१ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
सबैभन्दा बढि संक्रमित र मृतक अमेरिकामा छन् । जहाँ १७ लाख २० हजार ६ सय १३ ब्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १ लाख १ हजार ५ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ब्राजिलमा ४ लाख ३८ हजार २ सय ३८ जना संक्रमित भएका छन् भने २६ हजार ७ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा ३ लाख ७९ हजार ५१ जना संक्रमित भएका छन् भने ४ हजार १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बेलायतमा २ लाख ७० हजार ५ सय ७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ३९ हजार ९ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा २ लाख ३७ हजार ९ सय ६ जना संक्रमित भएका छन् भने २७ हजार १ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै इटालीमा २ लाख ३१ हजार ७ सय ३२ जना संक्रमित हुँदा ३३ हजार १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । फ्रान्समा १ लाख ८६ हजार ३ सय ६४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २८ हजार ६ सय ६५ जनाको मृत्यु भएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा १ लाख ६५ हजार ३ सय ८६ जना संक्रमित भएका छन् भने ४ हजार ७ सय ११ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा भने हालसम्म १ हजार ४२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
(Copied from Nepal Samaya)